Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na di ma ọ bụ nwunye gị ejighị gị kpọrọ ihe | Bezzia
Maria Jose Roldan | 27/04/2021 22:30 | Mmekọrịta
Otu n'ime nsogbu ndị kachasị na nsogbu ndị dị na di na nwunye, Ọ bụ eziokwu na ị ghara ịdị na-ahụ onye ị hụrụ n'anya. Nke a bụ ihe dị mma na agbanyeghị na onye a na-eleda anya nwere ike nwee anụrị n'ọtụtụ akụkụ nke ndụ ya, enweghị ekele n'akụkụ nke onye ọlụlụ ya pụtara na obi a thisụghị eju.
N’isiokwu na-eso nke a, anyị ga-egosi gị ụfọdụ ihe n’eme ka mmadụ ghara iche na onye ọlụlụ bara uru yana ihe ị ga-eme banyere ya.
1 Ihe kpatara na anaghị eji onye ọ bụla kpọrọ ihe
2 Otu esi eme ma ọ bụrụ na di gị ma ọ bụ nwunye gị ejighị gị kpọrọ ihe
3 Chọọ enyemaka nke ọkachamara
Ihe kpatara na anaghị eji onye ọ bụla kpọrọ ihe
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ma ọ bụ ihe ndị nwere ike ime ka mmadụ chee na ya na onye ọlụlụ ibe ya adịghị mkpa:
Enwere ụkọ ntụkwasị obi na nkwanye ùgwù
Iwe ndị dị n’etiti ha abụọ na-aga n’ihu na ọgụ dị n’ụbọchị
Ọ na-esiri ha ike ịrịọ mgbaghara maka mmejọ e mere na mpako mbu
O doro anya na enweghị nkwurịta okwu na-emetụta di na nwunye ahụ n'ụzọ na-adịghị mma
O nweghi ihe na-egosi na ị hụrụ mmadụ n’anya ofụri usen
N'iburu nke a, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na mmekọrịta ahụ adịchaghị mma ma ọ bụghị na onye ọzọ ahụ ejighị ya kpọrọ ihe. Di na nwunye a na - ekewa nke nta nke nta ma ọ dịghị oge ọ ga-eji kpọrọ onye ahụ.
Otu esi eme ma ọ bụrụ na di gị ma ọ bụ nwunye gị ejighị gị kpọrọ ihe
Ọ bụrụ n'ịchọpụta ka onye gị na ya si anaghị achọ iji ihe ị na-eme kwa ụbọchị egwu egwu, ọ dị mkpa ịnọdụ ala ma tụgharịa uche n'ọnọdụ ọnọdụ mmekọrịta ahụ. Si ebe a, ọ dị mma ịgbaso ntuziaka ma ọ bụ ndụmọdụ ndị a:
Ihe mbu igha eme bu iche echiche banyere uru onwe gi na bido site na imata ma inwere ike inyocha onwe gi.
Ọ dị mkpa ịmalite iche echiche banyere onwe gị ma nwee oge iji mee ihe masịrị gị. Ọ dịghị mkpa ka gị na onye òtù ọlụlụ gị nọrọ awa 24 kwa ụbọchị.
Ọ dịghị mma ilo ihe niile ma ịgwa onye ọ bụla. Ọ dị mkpa inwe ike iwepụta mmetụta na mmetụta dị iche iche.
Nkwurịta okwu gị na onye òtù ọlụlụ gị dị mkpa Ọ bụrụkwa na ọ dị ihe na-enye gị nsogbu, gị na di ma ọ bụ nwunye gị ahụ kwurịta ya n’udo.
N'ihe banyere inwe mmetụta nke ịbụ ndị na-abaghị uru site na di na nwunye n'oge niile, ọ bụ oge iji mee mkpebi na chọpụta ma ọ bara uru n'ezie ịnọgide na mmekọrịta ahụ.
Chọọ enyemaka nke ọkachamara
Tupu ịmalite ime ihe ọ bụla nwere ike bụrụ ihe doro anya, ọ ga-adị mma ka ị gakwuru ezigbo ọkachamara maara otu esi edozi nsogbu dị otú a. Onye na-agwọ ọrịa ahụ ga-enyocha ọnọdụ ahụ n'ụzọ zuru ezu ma site ebe a, nye onye ahụ ndụmọdụ na-echeghị na ya bara uru n'ụzọ kachasị mma. O nwere ike ime na mmekọrịta ahụ na-egbu egbu ma na-ekwesighi ka ị nọgide na ya. Ihe dị mkpa bụ na onye ahụ nwere obi ụtọ na ọ nweghị uru ịga n'ihu na di na nwunye ma ọ bụrụ na obi ụtọ ahụ abịaghị. Ọ dị mkpa icheta na ọ dịghị onye ga-ekekọta onye ọzọ iji nwee obi ụtọ Obi ụtọ ziri ezi na ọdịmma ga-ebi n'ime onwe ya, na-enweghị mkpa inwe onye ọlụlụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na di ma ọ bụ nwunye gị ejighị gị kpọrọ ihe
Uru na akụrụngwa nke mgbọrọgwụ konjac